အရိုးအဆစ်များသန်မာရန်ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး chondroprotectors များ ခွေးကမ္ဘာ
Susana godoy | 15/10/2021 11:48 | ရောဂါများ
ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲသိသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောရန်ရှိသည် ခွေးများအတွက် chondroprotectorsဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဆေးဝါးတွေကိုအမြဲပေးတာမဟုတ်ပေမယ့်၊ သူတို့ကမင်းကိုပိုကောင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်သဘာဝအကျဆုံးဖြည့်စွက်စာတွေကိုထည့်စဉ်းစားတာဘာမှမရှိဘူး။
ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းကာကွယ်လို့မရတဲ့ရောဂါအချို့ရှိတယ်၊ ငါတို့လိုချင်ပေမယ့်အဲဒါကတော်တော်လေးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားရမည့်အချိန်ဖြစ်သည် ပြီးတော့အဲဒါကငါတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာခွေးတွေအတွက် chondroprotectors တွေကစားတဲ့နေရာမှာပဲ။ သင်သူတို့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိလိုသလား။
1 chondroprotector ဆိုတာဘာလဲ
2 ငါ့ခွေးကသူ့မှာအဆစ်ရောဂါမရှိရင် chondroprotectors သောက်တာကောင်းလား။
3 ခွေးများအတွက် chondroprotector သည်မည်သည့်ရောဂါများကိုကူညီသနည်း
4 ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး chondroprotectors တံဆိပ်များ
5 ခွေးများအတွက် chondroprotectors သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
6 ငါ့ခွေးကို chondroprotectors ဘယ်လိုပေးမလဲ
7 chondroprotectors သည်ခွေးများအတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
8 ခွေးတွေအတွက်စျေးအသက်သာဆုံး chondroprotectors ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Cosequin 00.1415.00 Ultra...
Petprive ဖြည့်စွက် ...
Cosequin SE506115 စောင့်ရှောက်မှု ...
၎င်းတို့သည်အရိုးနုများကိုအာဟာရဖြည့်နေစဉ်ရေဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သောသဘာဝဖြည့်စွက်စာ (သို့) ဖြည့်စွက်စာများဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သောကြောင့် အဆစ်များကိုပိုမိုအားကောင်း၊ ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ ခွေးတွေမှာအဖြစ်အများဆုံးရောဂါတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
၎င်းသည်၎င်းသည် osteoarthritis ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုသတိရစေရမည်။ ပျော့ညံ့ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှုအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်တောင့်တင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာတစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ကုသရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရမည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်သဘာဝဖြည့်စွက်စာများလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ငါ့ခွေးကသူ့မှာအဆစ်ရောဂါမရှိရင် chondroprotectors သောက်တာကောင်းလား။
အမှန်တရားကအဲဒါဟုတ်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သဘာဝဖြည့်စွက်စာများဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုထားပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်ကူညီပေးသည်။ အဲဒါပိုတယ်၊ သင့်တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအဆစ်ရောဂါတစ်စုံတစ်ရာမရှိလျှင်ကာကွယ်ခြင်းသည်အမြဲပိုကောင်းသည်.
သင်၏ခွေးသည်ကြီးသောမျိုးစိတ်ဖြစ်လျှင်၎င်းတို့သည်အဝလွန်လျှင် (သို့) ယခင်ကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အချို့ရှိဖူးသည်နှင့်တူသောပြဿနာများပိုကြုံရတတ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောကိစ္စများသည်အနာဂတ်တွင်ဆိုးရွားသောပြသနာများရှိနိုင်ပြီးထို့ကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည်အမြဲပိုကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးများအတွက် chondroprotectors သည်ကုသမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲဖြည့်စွက်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခွေးများအတွက် chondroprotector သည်မည်သည့်ရောဂါများကိုကူညီသနည်း
ဒူးပြသနာများ- အဖြစ်များဆုံးအချို့မှာဒူးခေါင်းထိခိုက်မိခြင်း (သို့) အရွတ်ဒဏ်ရာများဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာ ၀ န်ကတင်ပြပေးမယ့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပိုမြန်မြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။
အရိုးပွရောဂါအဆစ်များဟောင်းနွမ်းသောအခါနာကျင်မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးနာတာရှည်ဖြစ်သောကြောင့်ခွေးများအတွက် chondroprotector သည်ဤလက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
အရိုးပွရောဂါ: ငါတို့ကအဲဒါကိုအရင်တုန်းကပြောခဲ့ပြီးအဲဒါကအဖြစ်များဆုံးအဆစ်ရောဂါပါ။ ဤဓာတ်နှင့်အတူရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ထုတ်သည်။
ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး chondroprotectors တံဆိပ်များ
ငါတို့အားလုံးပိုကောင်းတဲ့အခြားတံဆိပ်တွေကိုတွေ့နိုင်ပေမဲ့ Cosequin ကခွေးတွေအတွက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံး chondroprotectors တွေအကြားကွာဟချက်တစ်ခုရှိနေတာအမှန်ပါပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရှိပုံရသည် အထူးသဖြင့်အဝလွန်နေသောခွေးများနှင့် (သို့) အချို့သောအသက်အရွယ်ရှိပြီးသူ။ အရိုးနုများပွန်းစားခြင်းနှင့်အခြားအဆစ်ပြဿနာများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင်
၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ဤကိစ္စတွင်ဒဏ်ရာကိုကုသရန်အမြဲသုံးသည်။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများသည်သီးခြားအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းအခြားများစွာ၌နာတာရှည်ဖြစ်လာသည်မရ။ ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များရှိသည်။ ဗီတာမင်အီးပါဝင်တဲ့အပြင်
ငါတို့ရဲ့ခွေးတွေမှာအရိုးပါးရောဂါဖြစ်တာတော်တော်လေးတွေ့ဖူးတယ်။ မင်းရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ဆရာဝန်က osteoarthritis ကမင်းရဲ့အသက်ကိုအချိန်မရွေး ၀ င်လာနိုင်တယ်လို့မင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကမင်းကိုဒီလိုဖြည့်စွက်စာလိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသည် ၎င်းသည်ဤရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။
Hyaloral 120 comp...
ဒီပိုက်လိုင်းထဲမှာခွေးတွေအတွက်ဒီအခြား chondroprotector ကိုငါတို့ထားခဲ့လို့မရဘူး။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောအချက်များပေးသောထင်မြင်ချက်များသာမကဘဲ သူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုပြတဲ့လေ့လာမှုတွေရှိတယ်မရ။ ဒါတွေအပြင်မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်ပိုနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အရသာကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်။
ခွေးများအတွက် chondroprotectors သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ ခွေးများအတွက် Chondroprotectors များသည်များသောအားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါမရ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ မင်းကအချို့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းသတိထားနေရမယ်။ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများတွင် glucosamine ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့် glaucoma ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သင့်ခွေးသည်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရလျှင်သင်၏တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ သင်မည်သည့်အစားအစာကိုမှမတည့်လျှင်၎င်းကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ဖြည့်စွက်စာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်မဆိုဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အလွန်တိကျသောဝမ်းလျှောခြင်း (သို့) အော့အန်ခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တာရှည်မခံချေ။
ငါ့ခွေးကို chondroprotectors ဘယ်လိုပေးမလဲ
အမှန်တရားမှာဆေးလုံးပုံစံဖြင့်လာသောအခါအချို့ကိစ္စများတွင်အနည်းငယ်ပိုသက်သာနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခွေးအားလုံးသည်ဆေးသောက်ရန်သူငယ်ချင်းများမဟုတ်ပါ။ ဤဖြည့်စွက်စာအချို့သည်သင်နှစ်သက်ရန်ကောင်းသောအရသာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူကအမှန်ပဲဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုအစာနဲ့ရောထားတာပိုကောင်းတယ်.
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီသည် chondroprotector ကိုသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အားပေးနိုင်ရန်၎င်း၏ခြေလှမ်းများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘူယျအားဖြင့်ငါတို့အဲဒါကိုပြောနိုင်တယ် ၎င်းပမာဏသည်အလေးချိန်ပေါ်မူတည်သည် မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ထို့ကြောင့် ၅ ကီလိုမှ ၁၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောခွေးများသည်တစ်နေ့လျှင်တက်ဘလက်တစ်ဝက်လောက်သာစားနိုင်သည်။ မင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ရတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကသူတို့ကိုတက်ဘလက်နေ့တိုင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာကတော့ငါတို့ပြောသလိုပါပဲ၊ လက်ကမ်းစာစောင်ကိုကောင်းကောင်းဖတ်တာဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကိုတိုင်ပင်တာနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူး။
၎င်းသည်ကုသမှုတစ်ခုမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်အနာဂတ်ပြသနာများကိုကာကွယ်။ ဂရုစိုက်နိုင်သောဖြည့်စွက်စာတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်မရဲ့ခွေး chondroprotectants တွေကိုအဝလွန်တာနဲ့အဆစ်ပြဿနာတွေရှိနေတာကြောင့်အဲဒါကတကယ်အလုပ်ဖြစ်တာကိုငါတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါဟာတစ်ရက်ကနေနောက်တစ်နေ့အထိအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကိုမင်းမြင်နိုင်တယ်။ အဝလွန်နေလျှင်ဤအခြေအနေကိုတိုးတက်စေရန်အခြားလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သော်လည်း chondroprotector သည်အချိန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကြောင့်၎င်းတို့ရရှိသောစွမ်းရည်များတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၌အချို့သောရွေ့လျားသွားလာမှုဆိုင်ရာပြဿနာများကိုချန်ထားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ရှိခြင်းသည်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်.
ခွေးတွေအတွက်စျေးအသက်သာဆုံး chondroprotectors ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
အမေဇုံ: ၎င်းသည်စျေး ၀ ယ်အကြီးစားအဆင့်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကွဲပြားသောအမှတ်တံဆိပ်များ၊ လူသိအများဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်ဟုလည်းဖော်ပြသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုအမြဲမှန်ကန်စေပြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလည်းဖြစ်စေသည် စျေးကွက်တွင်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးစျေးနှုန်းများမရ။ ဤဖြည့်စွက်စာအမျိုးအစားများကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြင့်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Kiwoko: ၎င်းသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းတို့တွင်ခွေးများအတွက် chondroprotectors များလည်းရှိသည်။ သူတို့မှာအမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်၊ သင်တန်းတစ်ခုစီ၌စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငါတို့ရဲ့အမွေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု။
ကင်မီဖာမာတိရိစ္ဆန်ဖြည့်စွက်စာများသည် Kimipharma သို့ရောက်သည်နှင့်၎င်းအပြင်သင်ပျော်ရွှင်နိုင်လိမ့်မည် အလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများ၎င်းသည်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအားအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ရန်မလိုဘဲ၎င်းအားအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်လူနေမှုဘ ၀ တိုးတက်ရေးအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအကျော်ကြားဆုံးစတိုးဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
.ရာဝတီTíanimalတွင်သင်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းများမှကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲရှိသည့်ဖြည့်စွက်စာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တံဆိပ်အမျိုးမျိုး ဆေးလုံးပုံစံနှင့် ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပိုသက်သာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်တစ်ခု၏လုံခြုံရေးနှင့်ယုံကြည်မှုအပြည့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » ခွေးများအတွက် Chondroprotectors